Godax barre oo ka qoomameeyay hadal uu horay u yiri – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Godax barre oo ka qoomameeyay hadal uu horay u yiri
Godax barre oo ka qoomameeyay hadal uu horay u yiri
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inuu ka xun yahay hadalkii uu ka jeediyay magaalada Jowhar ee ahaa inuu fashilmay Imtixaamka Dowlad Goboleedka Puntland.
War- Saxaafadeedka ka soo baxay Wasaarada Waxbarashada ayaa u qornaa sidan.
1- Wasiirka waxa uu ku guda jira hadaljeedintii Ardayda iyo Waalidiinta Magaalada Jowhar ayaa lagu wargelinayaa in Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland uu ku dhawaaqay in uu Imtixaanka la jabsaday, iyadoo ay habbooneyd in Wasiirka raadinayo warkaas xaqiiqdiisa.
2- Wasiirka wuxuu u xaqiijinaya Ardayda, Waalidiinta iyo dhammaan Shacabka reer Puntland inuu garab taagan yahay uuna u rajeynayo in uu alle u fududeeyo howlaha Imtixaanka..
3- Wasiirka wuxuu bogaadinaya Ardayda, Waalidiinta, bahda Waxbarashada iyo dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan, dowlada waxbarasho ee ka soconaya dhammaan goboledka Soomaaliya.
Wasaaradda waxbarashada, Hidiha iyo tacliinta sare, waxey mar walbo u taagan tahay ilaalinta tayada iyo horumarinta waxbarashada dalka.
Previous articleShil gaari oo ka dhacay duleedka Hargeysa +Sawirro
Next articleDeg Deg:-Qarax Gaari oo goordhaw ka dhacay Muqdisho
WAR DEGDEG AH farmaajo raali galin ka bixiyey xusuuqii dawladii siyaad...
Wararkii ugu Dambeeyay Xiisad Dagaal oo ka Taagan Gobolka Sanaag